नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : सरकार इमान्दारीका साथ प्रस्तुत होउ, कुटनीतिक ढङ्गले सँयमता अपनाएर भारतसँग डिल गर । दुई देशका प्रधानमन्त्री लेबलमै बुद्धिमानी पूर्वक टेबुलटक गर ।
सरकार इमान्दारीका साथ प्रस्तुत होउ, कुटनीतिक ढङ्गले सँयमता अपनाएर भारतसँग डिल गर । दुई देशका प्रधानमन्त्री लेबलमै बुद्धिमानी पूर्वक टेबुलटक गर ।
नेपाल र भारत बिच सम्बन्ध बिग्रियो भने त्यसले पार्ने तत्कालिन र दिर्घकालिन प्रभाबको आँकलन गर्नुभएको छ ?? नेकपा र काँग्रेस तँ तँ म म गरे जस्तो होइन है खेलवाड नगर्नुस् !
कुरा कालापानी, लिम्पिया धुरा, लिपुलेकको मात्र होइन, हाम्रा मिचिएका सिमा क्षेत्रका सबै भुभागहरुको पनि उठाइनु पर्छ । हाम्रो एक ईन्च भुभाग पनि छोड्नु हुन्न । बिगतमा हाम्रा शासकहरुले एक पछी अर्को गर्दै गरेका गल्ति र लम्पसारबादको परिणाम अहिले हामी भोग्दैछौं । चोखा कोही छैनन बिगत देखी बर्तमान सम्म सत्ता चलाऊनेहरु । पानी माथिका ओभाना कोही नबने हुन्छ ।
कतै फेरी पनि हामी चुक्दै त छैनौँ - कालापानी, लिम्पिया धुरा, लिपुलेकको मात्र कुरा गरेर । खोइ हाम्रा अरु मिचिएका भुभागको कुरा ? कालापानी, लिम्पिया धुरा, लिपुलेकको चुच्चो थपेर नक्सा छापेर मात्र हुन्छ ? के गुमेका भुमी सजिलै फिर्ता हुन्छन ??
सत्ता पक्ष देखी प्रतिपक्षीहरुसम्म, सबै नेपाली एक ठाउँँमा उभिएर, साझा एजेण्डा सहित निकै साबधानी अपनाएर, कुटनीतिक ढङ्गले अगाडि बढीएन भने नेपाल र हामी नेपालीले ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्ने छ । यो नेपालमा आपसमा लडे जस्तो वा खेलाँचीको कुरा होइन । सरकार इमान्दारीका साथ प्रस्तुत होउ, कुटनीतिक ढङ्गले सँयमता अपनाएर भारतसँग डिल गर । दुई देशका प्रधानमन्त्री लेबलमै बुद्धिमानी पूर्वक टेबुलटक गर । हामी जनता पनि एउटै स्वरमा सरकार लाई साथ दिन पाउँ । बेइमानी नहोस । राष्ट्रियताको कार्ड देखाएर सत्ता स्वार्थ पुरा गर्ने काम नहोस । बिगतको लाजनीती फेरी हेर्नु नपरोस ।
हामीलाई हाम्रो माटो प्राण भन्दा प्यारो छ । हामीले त बिगतमा पनि बिदेशमै रहेका बखत पनि हाम्रा भुभाग फिर्ताका लागि अमेरिकामै जुलुस र प्रदर्शन गर्दै संसारको ध्यान आकर्सित गरेका थियौँ, भारतीय हस्तक्षेपका बिरुद्ध र हाम्रा मिचिएका भुभाग फिर्ता हुनुपर्ने माग सहित संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिबलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ अगाडि प्रदर्शन सहित ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका थियौँ । अमेरिकी राष्ट्रपती भवन व्हाइट हाउस अगाडि र अमेरिका स्थित भारतीय राजदुताबास अगाडि पनि प्रदर्शन गरेका थियौँ हेर्नुस तल फोटो भिडियो र समाचार अनि लिँकहरु ।
January 14, 2020 , Nepalmother.com :
December 16, 2020 Nepalmother.com :